Igumbi leSebe le-Eco Hostel 101
Igumbi elise- ihostela sinombuki zindwendwe onguJelena
Siyihostele encinci enobuhlobo kwi-eco, enendawo enkulu yangaphandle, elungiselelwe bonke abathandi bendalo. Ukuba ufuna ukukhwela amahashe, usele iwayini ye-blackberry, ujabulele iziqhamo eziphilayo, wenze i-yoga, okanye udibane nabantu abatsha ...
Umthamo wehostele yethu ngabantu abayi-18. Sinegumbi lokulala eli-1 elineebhedi ezi-4 (abantu abasi-8), igumbi le-dorm eli-2 elineebhedi ezi-2 (abantu aba-4) kunye negumbi labucala elinebhedi ephindwe kabini.
Onke amaxabiso asebenza kwibhedi e-1 kwindawo yokulala, ngaphandle kwegumbi labucala le-101 kunye ne-104, apho ixabiso lisebenza kwigumbi.
Ingaphandle enkulu, ii-vibes ezinkulu, yiza uzibonele
Ifumaneka e-Arandjelovac, i-Eko hostele yeSebe ibonisa igadi. Ihostele inezixhobo zesiqhelo: Phakathi kwezibonelelo ezahlukeneyo zale propati kukho i-terrace kunye negumbi lokuphumla ekwabelwana ngalo, i-WiFi yasimahla, ifriji, isitovu, ishawari, isomisi seenwele, kwaye onke amagumbi afakelwe igumbi lokuhlambela ekwabelwana ngalo kunye newodrophu.
Kodwa ihostele yethu icacile kuba nje iikhilomitha ezi-2.5 ukusuka kumbindi weArandjelovac uya kuziva ngathi ukude ngenene kwimpucuko.
Ihostele inegadi enkulu, ikhefi encinci kwaye ngexesha lasehlotyeni izihlandlo ezininzi ngeveki silungiselela iminyhadala eyahlukeneyo: iindibano zocweyo zokupheka, ikaraoke, ubusuku bemixholo, iikonsathi ze-acoustic, itumente ye-twister kunye neminye imidlalo.
Ihostele incediswa ngamavolontiya avela kwihlabathi liphela.
Sinezinja, iikati, iibhokhwe ezincinci zepigmies, kunye nezilwanyana zasendle ezifana ne-pheasant, ixhama, umvundla onokuthi uzibone ngamanye amaxesha ngokwethu ngokufanelekileyo. Ke ukuba uyathanda ukwenza ubuhlobo obutsha, izilwanyana zasekhaya kunye nendalo, le yeyona ndawo ifanelekileyo yokuchitha ixesha lakho lokubuyela umva.
Ukuqhekezwa okumangalisayo kunye neengoma zokukhwela kumakhulu ambalwa eemitha ukusuka kuthi.
Ngaphakathi kweekhilomitha ezili-10 kukho amachibi angama-4, ihlathi elineminyaka elikhulu ubudala, imithombo yamanzi okusela kunye namasimi eembono ezintle.
Izvor Aqua Park kunye neBukovicka spa yi-1.4 km ukusuka kwindawo yokuhlala.
Isikhululo seenqwelomoya esikufutshane yiBelgrade Nikola Tesla, i-93 km ukusuka kwi-Eko hostele yeSebe.
Sithetha ulwimi lwakho
Umthamo wehostele yethu ngabantu abayi-18. Sinegumbi lokulala eli-1 elineebhedi ezi-4 (abantu abasi-8), igumbi le-dorm eli-2 elineebhedi ezi-2 (abantu aba-4) kunye n…
4.89 (iingxelo zokuhlola 9)
Ukuzola, uxolo, iNdalo kunye ne-adventure yonke into enye.
Siza kukunceda nokuba kunjalo. Ukuba uyasifuna, yitsho nje.